> Resource > Transfer > Sida loo saar Barnaamijyada xawaaladaha ee Windows
Barnaamijyada ka "xawaaladaha" in XP daaqadaha Sidee inay ka soo saarto?
Waxaan leeyahay codsiyada dhowr bilaaban doono bootup. Laakiin waxay u badan yihiin ii. Waxaan doonayaa in aan nadiif ah qaar ka mid ah si aan u my computer dhakhso bilaabi kartaa. I macnaheedu ma aha waxaan doonayaa in meesha laga saaro ama tirtirto iyaga, Waxaan doonayaa oo dhan waa in aanay bilaaban doono kabaha. Fikrado kasta?
Barnaamijyada qaar ka mid ah, waa mid aad u caqli badan si ay u Boot ee xawaaladaha, sida barnaamijka antivirus, halka qaar ka mid ah oo aan loo baahnayn, waayo, iyagu waxay cuni doonaa badan oo xusuustaada iyo aad xawaaladaha arrin gaabis ah. Si aad u soo saarto barnaamijyo xawaaladaha, waxaa jira qalab ay bixiso shirkadda Microsoft: MSCONFIG. Waxaad u isticmaali kartaa si gab kuwa alaabta aadan rabin inuu ku bilowdo kulanka ay aad bilowgii si aad yarayso xawaaladaha your computer ee.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah waxyaabaha si toos ah u socda ee asalka aan la si fudud u ogaan karaa oo laga saaray suuqa kala MSCONFIG ah. Haddii aad ka heli computer weli bilaabo gaabis ah, waxaad u baahan tahay qalab barnaamijyada xawaaladaha Faydi ah in si cad loo kaxeeyo. Haddii aadan haysan doorasho hadda, waxaad heli kartaa aan halkan talo: Wondershare WinSuite 2012 . Tani Windows item xawaaladaha qalab Faydi kaa caawin kara si aad u hesho dhammaan barnaamijyada qarsoon ee asalka ah oo kuu ogolaanaya in aad iyaga gab ka mid ah.
Step1. Orod software barnaamijka xawaaladaha Windows fogeynayo
Ka dib markii ay ku rakibidda barnaamijka, waxa maamula on your computer. Guji "Hubi & TuneUp" dusheeda oo taga si "xawaaladaha Management" oo ku menu dhinaca bidix ah oo ka hooseeya "Windows Speedup", ka dibna riix "xawaaladaha Management" in ay sii wadaan.
Step2. Hubi oo ka soo saarto barnaamijyo xawaaladaha in ay yihiin waxtar lahayn
Halkan, waxaad tagtaan dalka "xawaaladaha Manager", taasoo lagu ogaan karaa dhammaan barnaamijyada aad si toos ah u ordaan marka Windows bilaabo. Waxaad iyaga ku hubin kartaa mid mid, oo u ogaato kuwa aadan rabin oo guji si "Disable" iyaga la mid click.
Ka sokow "xawaaladaha Manager", waxaa jira ah "Bootup Optimizer" doorasho. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa soo gaabin waqtiga xawaaladaha iyo disk adag oo lagu ogaan karo mar, taas oo ka dhigi kartaa computer bilaabi sida duulaya.
Ogow badan oo ku saabsan Wondershare WinSuite 2012
Maareeyaha xawaaladaha 7 Windows, si dhakhso ah oo Securer kabaha aad computer
5 Waxyaabaha aad Sameyn Karto Marka aad computer ma kabaha doonaa
Sida loo dardar Computer Back to ay Pace Original
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Windows Phone in Android Phones
Siyaabo Sahlan si ay u gudbiyaan fariimaha qoraalka ka iPhone 6 ilaa PC Mac / Windows
2 Methods si ay u gudbiyaan Photos ka iPod in ay iPad iyo iPad in iPod
Transfer Xiriirada ka Galaxy S3 S2 in ay in 1 Click